पार्टीको स्कुल - परिहास - नेपाल
नेकपामा पार्टीको स्कुल विभाग कसले चलाउने ? अहिले यो यति जटिल प्रश्न बनिरहेको छ, जसले पार्टीको बैठक चलिरहेको छैन । मै हुँ भन्ने नेताहरुको समेत यसमा दाबी छ । बरु ज्यान दिन तयार छन्, स्कुल विभाग छाड्न कोही तयार छैनन् । यो विभाग जसको हातमा गए पनि उसले आखिर पार्टीमा कस्तो स्कुल चलाउँछ र कार्यकर्तालाई कस्तो प्रशिक्षण दिन्छ भन्ने कुराको झलक अहिले नै प्राप्त भइसकेको छ ।
विभागमाथि एकपछि अर्को दाबी देखेर नेतृत्वको टाउको दुखी रहेकै बेला अर्को एउटा दाबी पनि थपिन आयो, भजनलालको । भजनलाल न पार्टी नेता हुन्, न त कार्यकर्ता नै । तैपनि अचानक पार्टी कार्यालयमै पुगेर उनले स्कुल विभाग दाबी गर्दा जम्मै चकित परे ।
पार्टीको हाइकमान्डसामु पुगेर भजनले भने, ‘नेताज्यूहरु स्कुल विभाग जिम्मा दिनोस्, म चलाउँछु । तपाईंहरुले चिन्तै लिनुपर्दैन ।’
चकितावस्थामा रहेका नेताजीले सोधे, ‘स्कुल विभाग चलाउने रे ? को हो तपाईं ? हाम्रो कार्यकर्ता हो ? पहिले त देख्याजस्तो लाग्दैन ।’
भजनलालले भने, ‘पार्टीको कार्यकर्ता हैन तैपनि स्कुल विभाग चलाउने आँट मसँग छ । मसँग लामो अनुभव पनि छ ।’
‘कस्तो अनुभव ?’ नेताजी पुलकित बने ।
‘मैले प्ले ग्रुपदेखि प्लस टुसमे त भएको स्कुल चलाइरहेको ११ वर्ष भइसक्यो ’, भजनले आफ्नो परिचय सुरु गरे, ‘एसईईमा मेरो स्कुल पाँच वर्षदे खि लगातार टपमा छ । हन्ड्रेड पर्सेन्ट ए प्लस । त्यसैले मलाई जिम्मा दिनोस्, तपाईंको स्कुललाई पनि पाँच वर्षभित्र टपमा पुर्‍याइदिन्छु ।’
भजनलालको प्रस्तावले नेताजीहरुको अनुहारमा अन्योलका रेखा देखिन थाले ।
प्रकाशित: श्रावण १९, २०७६